Fri, Jul 10, 2020 at 6:18pm
किन चाहँदैनन् बलिउडका नाम चलेका निर्देशकहरू सनी लियोनिसँग काम गर्न ?
एजेन्सी, ३१ असार पोर्न स्टारबाट बलिउड स्टार बनेकी सनी लियोनलाई यो पहिचान पोर्न स्टार भएको कारण प्राप्त भएको उनले बताएकी छन्। आज जे पनि छ त्यो सबै यसैको परिणाम हो र उनलाई कुनै अफसोच छैन। सनी बलिउडमा क्यारियर स्थापित गर्दैछिन् । उनले थुप्रैपटक आफ्नो पुरानो इमेजको कारण आलोचना सहनुपर्‍यो। यहाँसम्म कि ठूला निर्देशकहरू उनीसँग काम गर्न चाहँदैनन्। एक साक्षात्कारमा सनी भन्छिन्–“के भयो..
सलमान खानलाई नेपाल ल्याउने भन्दै ठग्ने ओडीसी इन्टरटेन्मेन्टका निर्देशक पक्राउ
काठमाडौँ, २९ असार बलिउड अभिनेता सलमान खानलाई नेपाल ल्याउन लागेका ओडीसी इन्टरटेन्मेन्टका प्रबन्ध निर्देशक सिमान्त गुरुङ पक्राउ परेका छन् । सलमान खानलाई नेपाल ल्याउने भन्दै लाखौं ठगी गरेको आरोपमा प्रहरीले प्रबन्धक गुरुङलाई पक्राउ गरेको हो । शुक्रबार गुरुङलाई महानगरीय अपराध महाशाखा, टेकुको टोलीले लाजिम्पाटबाट पक्राउ गरेको हो । प्रबन्धक गुरुङले सलमान खानलाई नेपाल ल्याएर कन्सर्ट गर्ने भन्दै कयौं टिकटहरु बेचेका थिए । महाशाखाका..
सलमान खानद्वारा हिट फिल्म ‘एक था टाइगर’को तेस्रो सिक्वेल बनाउने संकेत !
बुधबार, आषाढ २७, २०७५ साल
एजेन्सी, २७ असार बलिउड अभिनेता सलमान खानले हिट फिल्म ‘एक था टाइगर’को तेस्रो सिक्वेल बनाउने संकेत दिएका छन् । जानकारीमा आए अनुसार ‘एक था टाइगर’, ‘टाइगर जिन्दा हे’ पछि यसै फिल्मको तेस्रो शृंखला बन्ने संकेत सलमानले दिएका हुन् । रिलिजमा आएका यी दुवै फिल्मले बक्स अफिसमा कमाल गरेको थियो । दुवै सिक्वेलमा सलमान र कट्रिना कैफ एकसाथ देखिएका थिए, भने तेस्रो शृंखलामा..
बलात्कार मुद्दा परेपछि मिथुन चक्रवर्तिका छोरा महाक्षयको विवाह रोकियो
आईतवार, आषाढ २४, २०७५ साल
एजेन्सी, २४ असार भारतीय अभिनेता मिथुन चक्रवर्तिका छोरा महाक्षयको शनिबार हुने भनिएको बिहे रद्द गरिएको छ । महाक्षयमाथि बलत्कारको आरोपमा मुद्दा परेको थियो । विवाहको सम्पूर्ण तयारी भइसकेको अवस्थामा अनुसन्धानका लागि प्रहरी समारोहस्थलमै पुगेपछि बिहे रद्द गर्नुपरेको हो । यद्यपि, दिल्लीको एक अदालतले महाक्षय र उनकी आमा योगितालाई अगि्रम जमानत दिएकाले पक्राउ पर्ने सम्भावना भने टरेको छ । तमिलनाडुको नीलगिरी जिल्लास्थित उँटीमा रहेको..
सञ्जु फिल्मपश्चात के अब रणवीर कपुर र सञ्जय दत्त सँगै काम गर्दैछन् ?
बुधबार, आषाढ २०, २०७५ साल
एजेन्सी, २० असार रणवीर कपुर र सञ्जय दत्तको फिल्म कनेक्शन हुनु भन्दा पहिल्यैबाट चर्चा भईरहेको छ । अब यो जोडी एक ठुलो फिल्ममा सँगै देखिने भएका छन् । सञ्जु फिल्मपश्चात रणवीरको आगामी फिल्म ‘शमशेरा’ हो । यो फिल्ममा मुन्नाभाई सञ्जय दत्तले पनि साइन् गरेका छन् । यो फिल्म २०२० को जुलाई ३१ तारिखबाट दर्शकमाझ रिलिजमा आउँनेछ । यशराज ब्यानरले आफ्नो आगामी फिल्मको..
अक्षयले गरे ‘ट्वाइलेट-२’ को घोषणा, बाँकी स्टारकास्ट चयन गर्न बाँकी
एजेन्सी, १९ असार वर्ष २०१७ मा प्रदर्शनमा आएको फिल्म ‘ट्वाइलेट-एक प्रेम कथा’ ले बक्सअफिसमा सानदार कलेक्सन गरेको थियो । यो फिल्मको सक्सेसपछि अब अक्षय कुमारले यसको दोस्रो सिक्वेलको घोषणा गरेका छन् । उनले ट्विटरमार्फत फिल्मको घोषणा गर्दै लेखेका छन्, 'अबको तयारी अर्को ब्लकबस्टर मिसन ‘ट्वाइलेट-२’ का लागि । यसपटक बदलिनेछ पूरा देश । चाँडै आउँदैछु ।' अक्षय कुमारले एक सर्ट भिडियो पनि..
सोमबार, आषाढ १८, २०७५ साल
एजेन्सी, १८ असार बलिउडमा केही चलचित्र असफल हुँदैमा कलाकारको करिअर सकिदैन । यसको राम्रो उदाहरण बनेका छन्, नायक रणवीर कपुर । लगातार असफल चलचित्र दिएपछि रणवीर कपुरको करिअर सकिएको चर्चा हुन थालेको थियो । तर, शुक्रबारदेखि रिलिज भएको चलचित्र ‘सञ्जु’ले रेकर्डतोड कमाई मात्र गरेको छैन, रणवीर कपुरलाई अबको सुपरस्टारको बाटोमा समेत दौडाइदिएको छ । यो चलचित्रले ३ दिनमै १ सय करोडको आँकडा पार..
‘सञ्जु’ले पहिलो दिन कमायो ३४ करोड, कस्तो छ फिल्म ?
एजेन्सी, १७ असार बलिउडका विवादित अभिनेता सञ्जय दत्तको जीवनमा आधारित फिल्म सञ्जुले पहिलो दिन सुखद व्यापार गरेको छ । शुक्रबार फिल्मले विश्वव्यापी बजारमा ३४ करोडभन्दा बढि कमायो । यो वर्ष भारतमा रिलिज भएका चलचित्रहरुमध्ये पहिलो दिनको सर्वाधिक कमाई सञ्जुले गरेको हो । यसअघि रेस ३ ले पहिलो दिन २९ करोड कमाएको थियो भने ३ दिनमा सय करोडको विजनेस गरेको थियो । सञ्जुले..
अर्जेन्टिना समर्थक शाहरुखले भने : ‘म्याराडोनाले मेरो प्रेसर बढाइदिए’
एजेन्सी, १४ असार अहिले विश्वभर विश्वकपको राैनक छाएकाे छ । अाम नागरिकदेखि सेलिब्रिटीहरु सबैले अाफूलार्इ मन पर्ने टिमलार्इ समर्थन गरीरहेका छन् । भारतमा क्रिकेटजस्तो फुटबलकाे क्रेज नभएपनि केहि नागरिकहरू र सेलिब्रिटीहरु भने फुटबलका फ्यान छन् । जसमध्ये एक सेलिब्रिटी हुन् शाहरुख खान । उनकाे समर्थन भने अर्जेन्टिनालाई छ । मेसीका फ्यान हुन् शाहरूख । मंगलबार राति अर्जेन्टिना र नाइजेरियाबीचको निर्णायक खेलमा अर्जेन्टिनालाई..
अनुष्काले रणबीरसँग सोधीन् - तिम्रो आफ्नो श्रीमती बाहेक कति जनासँग शारीरिक सम्वन्ध थियोे ?
एजेन्सी, १४ असार संजय दत्तको बायोपिक ‘संजू’मा बोलिएको एउटा डायलगलाई लिएर रणबीर कपूर र अनुष्का शर्मा विरुद्ध महिला आयोगमा उजुरी परेको छ। उजुरीकर्ताहरुका अनुसार फिल्ममा रणबीर अनुष्काले एउटा सीनमा यौनकर्मीहरुलाई अपमानजनक शब्द प्रयोग गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार संजूुको ट्रेलरको एक सीनमा अनुष्का रणबीरसँग सोध्छिन्, ‘तिम्रो आफ्नो श्रीमती बाहेक कति जनासँग शारीरिक सम्वन्ध थियोे ?’ जवाफमा रणबीर बोल्छन्, ‘यौैनकर्मीलाई छाडेर ३०८ जना..
फिल्मपछि टीभीमा पनि फ्लप हुँदै सलमान, ‘दसका दम’ मा देखिएन दम
एजेन्सी, १३ असार बलिउड नायक सलमान खानको फ्यान फलोइङ यति चर्को छ कि उनको नामैले जुनसुकै फिल्म सुपरहिट हुन्छ । अहिले प्रदर्शन भइरहेको फिल्म ‘रेस ३’ कै कुरा गर्दा पनि समिक्षकहरुले रद्दी भन्दाभन्दै पनि फिल्मले सयौं करोडको कमाई गरिसकेको छ, सिर्फ सलमानको बलमा । खैर फिल्मको व्यापार अहिले भने ओरालो लागिसकेको छ । सलमान फिल्ममा मात्रै सिमित छैनन्, टेलिभिजन प्रस्तोताको रुपमा पनि..
‘दबंग ३’को तयारीमा सलमान, तर फ्यान भन्छन्-‘यस्तो वाहियात फिल्म नगर’
मंगलवार, आषाढ १२, २०७५ साल
एजेन्सी, १२ असार चलचित्र ‘रेश ३’ भारतीय बक्स अफिसमा पूर्ण रुपमा असफल भएपछि नायक सलमान खानका फ्यानहरु निराश भएका छन् । गतबर्षको इदमा ‘ट्यूबलाइट’ र यो बर्षको इदमा ‘रेश ३’ असफल भएपछि सलमानको क्रेज घट्न थालेको विश्लेषण गरिएको छ । तर, सलमानले गलत चलचित्र रोज्दा यस्तो परिणाम आएको टिप्पणी पनि गरिन्छ । अब, उनै सलमान खान ‘दबंग ३’ को तयारीमा लागेका छन्..
बलिउड अभिनेता जोन अब्राहम र अक्षय कुमार भिड्दै, कसले बाजी मार्ला ?
सोमबार, आषाढ ११, २०७५ साल
एजेन्सी, ११ असार अभिनेता जोन अब्राहमको फिल्म ‘सत्यमेव जयते’ र अर्का बलिउड अभिनेता अक्षय कुमारको फिल्म ‘गोल्ड’ एक साथ दर्शकमाझ रिलिजमा आउने भएका छन् । जोन र अक्षय दुवै अभिनेताको फिल्म आगामी अगष्ट १५ तारिखबाट दर्शकमाझ रिलिजमा आउँदैछ । ‘गोल्ड’ फिल्मको पोष्टर रिलिज गरिएपछि जोनको फिल्म ‘सत्यमेव जयते’को पाि पोष्टर रिलिज गरिएको छ । साथै पछिबाट अक्षयको फिल्म ‘गोल्ड’को अर्को पोष्टर पनि..
‘मुगल-ए-आजम’ जस्तो सिनेमामा काम गर्न चाहन्छु : रणबीर कपूर
एजेन्सी, ८ असार बलिउडका रक स्टार रणबीर कपूर निकै चर्चामा छन् । उनी सुपरहिट सिनेमा ‘मुगल–ए–आजम ‘ जस्तो सिनेमामा काम गर्न चाहन्छन् । ६० को दशकमा सर्वाधिक सफल सिनेमामा दरिएको मुगल–ए–आजम आज पनि मानिसहरुका बीच निकै लोकप्रिय छ । सिनेमामा अभिनय सम्राट दिलीप कुमार, मधुबाला, र पृथ्वीराज कपूरले महत्वपूर्ण भूमिकामा अभिनय गरेका थिए । सिनेमामा पृथ्वीराज कपूरले अकबरको भूमिकामा आफूलाई प्रस्तुत गरेर..
सुजय घोषको आगामी क्राइम थ्रिलर फिल्ममा अमिताभ र शाहरुखले एकैसाथ काम गर्दै !
बुधबार, आषाढ ६, २०७५ साल
एजेन्सी, ६ असार फिल्ममेकर सुजय घोषको फिल्ममा अमिताभ बच्चन र शाहरुख खान एक साथ आउने भएका छन् । सुजय घोषको फिल्म ‘बद्ला’मा अमिताभ र शाहरुखसँगै आउन लागेका हुन् । यो एक क्राइम थ्रिलर फिल्म हो । तर यो फिल्ममा शाहरुख खानले अभिनय भने गर्ने छैनन् । उनी एक निर्माताको रुपमा आउने छन् । यो फिल्ममा ताप्सी पन्नु पनि रहेकी छन् । सुजय..
शुक्रबार रिलिज भएको रेस ३ को नेपाल मूल्य २ करोड ४० लाख
मंगलवार, आषाढ ५, २०७५ साल
काठमाडौं, ५ असार शुक्रबार रिलिज भएको बलिउड अभिनेता सलमान खान अभिनित 'रेस ३'को नेपाल वितरण अधिकारलाई २ करोड ४० लाख मिनिमम ग्यारेन्टी एमजी' बुझाइएको छ। नेपाल वितरण अधिकार खरिद गरेको गोपीकृष्ण इन्टरटेन्मेन्टका निरज पौडेलले सो कुराको पुष्टि गरे। यस सम्झौता अन्तरगत फिल्म नचलेपनि उक्त रकम सलमान खानलाई तिर्नुपर्नेछ। 'रेस ३'मा सलमान बाहेक अनिल कपुर, बबी देवल, ज्याकलिन फर्नान्डिज, डेजी शाह, सकिब सलिम आदिको..
कसले गर्यो सलमान खान अभिनीत चलचित्र 'रेस ३' फेसबुकमा लिक ?
एजेन्सी, ४ असार एक्सनले भरपूर मल्टिस्टारर फिल्मको डबिङ प्रिन्टलाई फेसबुकका कैयौं प्रयोगकर्ताले अपलोड गरिदिएका छन्। फिल्मलाई कैयौं ग्रुप र अन्य प्रयोगकर्ताले सेयर गरेका छन्। इदको अवसरमा रिलिज भएको खानको नयाँ फिल्म रेस ३ ले भारतीय बक्सअफिसमा राम्रो कमाइ गरिरहेको छ। उसले दुई दिनमै ६७ करोड भारतीय रूपैयाँ बटुलिसकेको छ। यसैबीच सोसल मिडियाबाट सार्वजनिक भएको उक्त फिल्मको ब्यापारमा असर गर्ने देखिएको छ। फिल्मले रिलिजको..
फेरी मुद्दामा तानिए सलमान खान, पैसा लिएर पनि कन्सर्ट नगरेको आरोप
एजेन्सी, ३ असार नेपालमा गत वर्ष आयोजना हुने भनिएको बलिउड नायक सलमान खानको कन्सर्ट अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । दुईपटक मिति तय भएर पनि कन्सर्ट स्थगित भएको छ । जबकि सलमान र उनको टिमले एडभान्सका रुपमा करोडौं रकम लगिसकेका छन् । ठिक यस्तै केसमा अमेरिकाको एउटा कम्पनीले सलमानसहित थुप्रै सेलिब्रिटीहरुलाई अदालतमा तानेको छ । नेपाली गायक उदितनारायण झा पनि यसमा मुछिएका छन्..
पार्टीमा रणवीर कपुरको बेइज्जत गरेका सञ्जय दत्त अब उनकै प्रशंसक !
शुक्रबार, आषाढ १, २०७५ साल
एजेन्सी, १ असार केही समयअगाडि बलिउड अभिनेता सञ्जय दत्तले आफ्नो घरमा एउटा पार्टी राखेका थिए । त्यतिबेला भर्खरै ‘सञ्जु’ फिल्मको घोषणा भएको थियो र रणवीर कपुर शिर्ष भूमिकाका निम्ति अनुवन्धित भएका थिए । पार्टीमा रणवीरलाई पनि निम्त्याएका थिए सञ्जयले । तर, आफैंले निम्त्याएको पाहुनालाई उनले सबैका बीचमा अपमानजनक व्यवहार गरे । सञ्जु फिल्ममा उनको छनोटलाई लिएर सञ्जयले रणवीरको धज्जी उडाए । ‘सुन्दैछु, तिमीले..
हेर्नुहोस् कसरी सलमान खानको काखमा बसे साहरुख खान (भिडियो सहित)
एजेन्सी, ३१ जेठ यो बर्षकै प्रतिक्षित बलिउड चलचित्र ‘जिरो’को ‘इद टिजर’ सार्वजनिक गरिएको छ । इदको अवसर पारेर चलचित्रको अर्को टिजर रिलिज गरिएको छ । यो टिजरमा बलिउडका दुई चर्चित सुपरस्टार साहरुख खान र सलमान खान देखिएका छन् । तर, टिजरमा साहरुख खानलाई होचो व्यक्तिको भूमिकामा देख्न सकिन्छ । आनन्द एल रायको निर्देशनमा तयार भएको यो चलचित्र डिसेम्बर २१ बाट रिलिज हुँदैछ ।..
'रेस ३'को नेपाल वितरण २ करोड ४० लाख एमजीमा गोपीकृष्ण इन्टरटेन्मेन्टले किन्यो (भिडियो सहित)
काठमाडौँ, २९ जेठ शुक्रबार रिलिज हुने बलिउड अभिनेता सलमान खान अभिनित 'रेस ३'को नेपाल वितरण अधिकारलाई २ करोड ४० लाख मिनिमम ग्यारेन्टी (एमजी' बुझाइएको छ। नेपाल वितरण अधिकार खरिद गरेको गोपीकृष्ण इन्टरटेन्मेन्टका निरज पौडेलले सो कुराको पुष्टि गरे। यस सम्झौता अन्तरगत फिल्म नचलेपनि उक्त रकम सलमान खानलाई तिर्नुपर्नेछ। पौडेलले ट्रेलरले राम्रो चर्चा बटुलेकाले फिल्मले सो लगानी उठाउनेमा आफू ढुक्क रहेको बताए। फिल्म नेपालका..
दिपक र दीपाको ‘छक्का पन्जा-३’मा स्वस्तिमा खड्काको इन्ट्री
काठमाडौं,२८ जेठ अहिले ‘छक्का पञ्जा’को तेस्रो सिक्वेल फिल्म ‘छक्का पञ्जा ३’ को सुटिङ भईरहेको छ । दोस्रो सिक्वेल फिल्म ‘छक्का पन्जा २’मा लीड रोलमा काम गरेकी अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्का ‘छक्का पन्जा ३’मा पनि देखिने भएकी छन् । भर्खरै अभिनेत्री खड्काको ‘छक्का पन्जा ३’मा इन्ट्री भएको हो । निर्देशक दिपाश्रीका अनुसार यो फिल्मको एउटा गीतमा स्वस्तिमालाई देख्न सकिनेछ । साथै फिल्मको केही दृश्यमा..
बलिउड अभिनेता सलमान खानको हत्या गर्ने योजनामा रहेका डन पक्राउ
आईतवार, जेष्ठ २७, २०७५ साल
एजेन्सी, २७ जेठ बलिउड अभिनेता सलमान खानको हत्याको योजनामा रहेका मोस्ट वान्टेड डन सम्पत नेहरालाई भारतीय प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । हरियाणा प्रहरीको विशेष कार्यदलले हैदराबादबाट उनलाई पक्राउ गरेको हो । प्रहरीका अनुसार सम्पत नेहराले सलमान खानका प्रत्यक गतिविधिहरुलाई निगरानी गरिरहेका थिए । सलमानलाई मार्ने योजनाअुनसार मुम्बई गएर उनले सलमानले आउजाउ गर्ने स्थानदेखि लिएर उनका ‘बडी गार्ड’ का बारेमा पनि जानकारी लिइसकेका..
सलमान खानले भने, ‘सञ्जुमा सञ्जय दत्त आफैले आफ्नो रोल प्ले गर्नुपर्थ्यो’
एजेन्सी, २५ जेठ अभिनेता सञ्जय दत्तको बायोपिक फिल्म ‘सञ्जु’ जुन २९ तारिखबाट दर्शकमाझ रिलिजमा आउँदैछ । यो फिल्ममा रणवीर कपुरले सञ्जय दत्तको भुमिकामा अभिनय गरेका छन् । यो फिल्ममा रणवीरले सञ्जय दत्तको २० वर्षको उमेर देखि ५८ वर्षको उमेरसम्मको लुक्स बनाएका छन् । यसै लुक्सका कारण अहिले रणवीरको निकै चर्चा भईरहेको छ, तर यो विषयमा अर्का अभिनेता सलमान खानले भने आफ्नो..
बलिउड चलचित्र ‘सन्जु’को पोष्टरमा नेपाली अभिनेत्री मनिषा अटाएपछि …
एजेन्सी, २४ जेठ बलिउड निर्देशक राजकुमार हिरानीले आफ्नो फिल्म ‘सन्जु’ को नयाँ नयाँ पोष्टर हरेक दिन सार्वजनिक गरिरहेका छन् । उनले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो पोष्टरमा रणवीर कपुर र मनिषा कोइरालालाई देखाइएको छ । फिल्ममा मनिषाले रणवीरकी आमा नरगिसको भूमिका निभाएकी छिन् । पोष्टरमा उनी पहिलोपटक देखिएकी हुन् । सञ्जुको ट्रेलरमा मनिषालाई खासै स्थान दिइएको छैन । सञ्जु फिल्ममा मनिषाको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको अनुमान..
साउथ इन्डियन अभिनेता रजनिकान्तमाथि सय करोडको मानहानी मुद्दा !
एजेन्सी, २३ जेठ अभिनेता रजनीकान्त अभिनित चलचित्र काला आउँदो शुक्रवार जुन ७ बाट रिलिज हुर्दैछ । तर यति बेला चलचित्र कानुनी झमेलामा परेको छ । बिशेषत चलचित्रका मुख्य कलाकार रजनीकान्तलाई जवाहर नाडर नाम गरेका एक पत्रकारले मानहानीको मुद्दा हालेका छन् । उक्त पत्रकारले चलचित्रमा रजनीकान्तले निर्भाह गरेको भूमिका आफ्नो पिता थिरावीयम नाडरको वास्तिबिक जीवनमा मेल खाएको भन्दै मुद्दा हालेका हुन् ।..
२ करोड ५२ लाख नक्कली नोट काण्ड : चलचित्र निर्माता वाग्लेले नक्कली नोट छपाएको स्वीकारे
काठमाडौं, २२ जेठ तीन साता अघि फिल्म निर्माता माधब वाग्लेको कोठाबाट २ करोड ५२ लाख रुपैयाँ प्रहरीले फेला पारेको थियो भने नेपाल राष्ट्र बैंकले सो नोट नक्कली भएको पुष्टि गर्दै प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको थियो । अहिले यसै नक्कली नोट काण्डमा मुछिएका फिल्म निर्माता वाग्लेले गरेको नक्कली नोटको कारोबार विषयमा अनुसन्धान सकाएको छ। तीन साता अघि मात्रै निर्माता वाग्लेको कोठाबाट..
बलिउड अभिनेत्री आलियाले बढाइन अाफ्नाे पारिश्रमिक
एजेन्सी, २१ जेठ पछिल्लाे समय निकै चर्चामा रहेकी बलिउड अभिनेत्री आलिया भट्टले अाफ्नाे पारिश्रमिक बढाएकी छिन् । उनले खेलेका फिल्म एकपछि अर्काे गर्दै हिट हुन थालेपछि उनले अाफ्नाे पारिश्रमिक बढाएकी हुन् । भारतीय सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार, बक्स अफिसमा लगातार आम्दानी गरिरहेको उनकाे पछिल्लाे फिल्म ‘राजी’को सफलताले उनी उत्साहित छिन् । यही कारण आलिया भट्टको ‘स्टारडम’ मात्रै बढेकाे छैन, उनले आफ्नो पारिश्रमिक पनि..
अनमोलको नयाँ फिल्मको नाम जुर्‍यो, ' ब्याचलर बन्टी' हुनेछ नाम
एजेन्सी, २० जेठ अभिनेता अनमोल केसीलाई महँगो पारिश्रमिक तिरेर अनुबन्धित गरिएको र मिलन चाम्सको निर्देशनमा बन्ने फिल्मको नाम जुराइएको छ। फिल्मको नाम 'ब्याचलर बन्टी' राखिएको छ। हाललाई अनमोल मात्र फाइनल गरिएको फिल्मका लागि नायिकाको खोजी भइरहेको छ। प्रदीप भारद्वाजले लेखन रहेको फिल्म फागुन १७ मा प्रदर्शन गरिने निर्माण पक्षको लक्ष्य छ । ‘ब्याचलर बन्टी’को सम्पूर्ण छायाँकन युरोपमा हुनेछ । चाम्स इन्टरटेनमेन्ट र सुदिप खड्का..
हजुरलाई थाहा छ ! अभिनेता सञ्जय दत्तले जेलमा आत्महत्याको प्रयास गरेका थिए
एजेन्सी, १८ जेठ चर्चित नायक हुन् बलिउड अभिनेता सञ्जय दत्त । यीनै नायककाे जीवनमा अाधारित भएर बनाएकाे फिल्मकाे ट्रेलर सार्वजनिक भएकाे छ । भनिन्छ अभिनेता सञ्जय दत्तले जेलजीवन बिताउने क्रममा आत्महत्याको प्रयास गरेका थिए । हालै सार्वजनिक भएकाे उनको जीवनीमा आधारित फिल्मको ट्रेलरले पनि यसै भन्छ। मुम्बई बम विस्फोटन काण्डमा उनी जेल परेका थिए । लामो सयम जेलजीवन बिताएका सञ्जय दत्तकाे जीवनीमा आधारित..
Results 550: You are at page 11 of 19